Kedu ihe na etu esi emepụta ihe mgbawa cyclogenesis | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Ihe ikuku
N’oge otutu udu mmiri anyi enwego oke oke oke ikuku ndi butere ihe ojoo n’obodo anyi. Ndị na-amụ gbasara ihu igwe kwupụtara ụdị oke ifufe ndị a dịka ihe mgbawa cyclogenesis. Otú ọ dị, anyị maara ihe cyclogenesis bụ? Kedu ihe ọ dabere ma ọ bụrụ na ọ bụ "ihe mgbawa"?
N'isiokwu a ị nwere ike ịmụta ihe niile gbasara cyclogenesis. Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Kedu ihe mgbawa cyclogenesis?
3 Isi na amụma
4 Fọdụ yiri phenomena
Kedu ihe mgbawa cyclogenesis?
Iji ghọta echiche a, anyị ga-ebu ụzọ mara ihe ikuku mmiri dị. Ndị a bụ mpaghara nrụgide dị ala ebe ikuku na-agbagharia na elekere na nso ugwu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nsogbu niile ma ọ bụ nkụda mmụọ na-enweta cyclogenesis n'ụzọ ụfọdụ n'oge mmalite ha na mmepe. Na steeti mbụ ha, etolite site na usoro ikuku site na sistemụ oyi, nke na-ekpo ọkụ na nke mkpuchi. Obere uru nke ikuku ikuku na-ebelata n'oge akụkụ mbụ nke ndụ ya.
Ihu mgbawa cyclogenesis bụ guzobe oke mmiri ozuzo ngwa ngwa na ike. Nke ahụ bụ, dobe na nrụgide elu n'ime obere oge. Nke a ghọrọ oke ọgba aghara na awa ole na ole. Okwu izugbe eji maka nkụda mmụọ miri emi a na-ebuwanye ibu bụ "bọmbụ" nke ihu igwe.
Na cyclogenesis na-agbawa agbawa ikuku ikuku na-ebelata ihe dịka 24 mb ma ọ bụ karịa. Ọ na - apụtakarị na latitude n'etiti ogo 55 na 60. Nke a bụ n'ihi na usoro nke cyclogenesis na-emetụta ntụgharị ụwa. Ha na-apụtakarị na oke osimiri Atlantic na Pacific.
Nkọwa maka nhazi nke cyclogenesis nke oke nha ahụ adịghị mfe ịza. Ọ dabere na latitude. Iji mepụta mgbapụta nke ọkwa a, oke ifufe nke na-arụkọ ọrụ nke ọma na ọkwa ọzọ dị elu ga-ebikọ n'otu oge na mmekọrịta. Ha aghaghi idi n 'uzo di omimi nke mere na odi nkpa ma obu mbido nke usoro obi ida mba di n'etiti ha n'oge na adighi anya.
Ọtụtụ mmadụ Ha na-agbagọkarị ihe mgbawa na-agbawa agbawa na ajọ ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe. Ha enweghị ihe ha ga-eji ya eme. Cyclogenesis na - eme naanị n'etiti latitude na ọ bụghị dịka cyclones ebe okpomọkụ. Ọ bụ ezie na o nwere aha zuru oke maka ihe nkiri, ọ bụghị oke mmiri ozuzo ka ha na-ekwu.
Na Spain ha emeela n'ọtụtụ oge ọ bụ ezie na ọ dị ụkọ na mpaghara anyị. Enwere ike ịkpọ ya oke ifufe miri emi maka nghọta gị ngwangwa, ebe ifufe ya dị oke egwu ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ajọ ifufe. Oké ifufe nke dị n'oké osimiri dị njọ karịa nke ifufe na-efekarị, ya mere ọ na-ebutekarị ọdachi. A na-agbakwunye okwu mgbawa dịka ọ na-egosi na ọ dị omimi nke ukwuu.
Isi na amụma
E nwere ụfọdụ ndị iche n'etiti oké ifufe na-ata ụfọdụ usoro nke imikpu na ike nke a onu. Nke a bụ n'ihi na mmesi ike a bụ nwayọ nwayọ ọ bụghị ọsịsọ. Na cyclogenesis na-agbawa agbawa, usoro nke usoro ndị na-etolite ya na-aga ngwa ngwa ma na-aga n'ihu. Nke ukwuu, na ọ bụ ihe pụrụ iche maka ihu igwe na mmetụta ya n'elu.
N’ikwu okwu gbasara ihu igwe, ọ dị mkpa ịkpọ ya ụzọ ọzọ ebe ọ bụ na usoro nhazi ya na nsonazụ ya dị iche. Ejikọtara ha n'ụzọ dị otú a iji kpachara anya ma dọrọ uche gaa na ọgba aghara cyclonic dị oke egwu na njirimara puru iche.
Ya mere squall na-agbawa agbawa bụ mpaghara nke nnukwu miri emi, ma ọ bụghị ụzọ ọzọ gburugburu. N'ihi na ihe ịtụnanya a na-ewe naanị elekere iji mee, ọ na-esiri ike ịkọ. Onweghi uzo ekwesiri ka mmadu gha tupu tupu ya ghaputa ihe a.
N'izugbe, cyclogenesis na-agbawa agbawa na-eme na mpaghara ụgbọ mmiri ebe enweghi ike inweta ọtụtụ data. Ọ bụghị ụdị niile nwere ike igosipụta ọnọdụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịmalite site na nyocha mbụ nke na-ezighi ezi ma ọ bụ nkwarụ, ọ gaghị ekwe omume ịkọ ihe a. Na mgbakwunye, a ga-eji ụdị ọnụọgụgụ nke nwere oke ohere gbasara mbara igwe. Nke ahụ bụ, ọ ga-emegherịrị iji rụọ ọrụ n'ọtụtụ buru ibu ma n'otu oge ahụ mpaghara ka enwere ike ịmegharị obere ihe omimi.
Modelsdị arụmọrụ nwere ike iwepụta cyclogenesis n'ọdịnihu ha dị obere. Ozugbo usoro ihe mgbawa na-aga n'ihu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị niile na-egosipụta ya.
Fọdụ yiri phenomena
Enwere ihe omimi nke ihu igwe yiri nke cyclogenesis na-agbawa agbawa. Otu n'ime ha bụ ikpe nke Gordon n’afọ 2006. Oke ikuku siri ike dakwasịrị Galicia na Delta. Otú ọ dị, ha abụghị cyclogenesis dị ka a na-eche. Na ikuku enwere otutu onodu na eweputa ifufe siri ike na ifufe na uzo di iche iche: site na nkpuru (oke ikuku) rue oke (ifufe na oke ikuku). Ọnọdụ a dịgasị iche ma ọ bụ ọtụtụ ọnọdụ nwere ike inye ajọ ifufe.
N'okwu a, ifufe ndị a dị a Atiya 3 ajọ ifufe mgbe ha kacha dị anya site na peninshula. Ka ajọ ifufe na-abịakwute ala ya, ọ na - eji nwayọọ nwayọọ daa mbà. Ọ ghọrọ ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ. Mgbe ọ banyere Galicia, oke mmiri ozuzo jidere ya. Nke ahụ mere ka ọ gaa n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke peninshula ahụ n'agaghị usoro dịka nke mgbawa cyclogenesis guzobere n'oge ọ bụla.
Ihe omume yiri nke ahụ bụ mgbe ọ mere ebe okpomọkụ cyclone Delta na 2005. Oké ifufe nke ajọ ifufe a buuru ya dara mba ọ bụ ezie na ebe ahụ gbasaa. Nke ahụ bụ, ọ bụ ezie na ha enwechaghị ike, ha gafere ebe ndị ọzọ. Ka oge na-aga, ọgba aghara dị egwu weghaara ya nke mere ka ọ daa na Canary Islands. Mmetụta mpaghara na asụsụ ndị mere ka ifufe dị ike na ụfọdụ agwaetiti. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ kpatara usoro mgbawa. N'ihi nke a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ifufe ifufe ma ọ bụ oké ifufe na-ejikarị mgbagwoju anya na cyclogenesis na-agbawa agbawa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ọ pụtawo nke ọma usoro na nsonaazụ nke cyclogenesis gụnyere na anyị na-enyere aka dozie ndị na-emegharị ya. Ajuju ọ bụla i nwere banyere ya, egbula oge ịhapụ ya na nkwupụta. Aga m eji obi uto zaghachi gi 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Kedu ihe na etu esi emepụta ihe mgbawa nke cyclogenesis